Hevitra MPANOHARIANA | Janoary 2011 |
Fihaonan'ny Bilaogera zoma 28 janoary 2011
2011-01-27 @ 17:07 in Ankapobeny
Hotontosaina eto Antananarivo ao amin'ny HdO ao amin'ny Le Bus Antanimena ny Antananarivo mibilaogy 7 izay hihaonan'ny Bilaogera - mpitoraka bilaogy - mpamaham-bolongana eto Antananarivo sy ny manodidina azy. Manomboka amin'ny fito hariva io fihaonana zoma 28 janoary 2011 io ka avy eo dia ho hita ny ho tohin'ny fihaonana izay raha ny farany teo no tarafina dia karaoke sasakalina tetsy amin'ny Hotel St-Laurent Ambodifilao no niafarany. Ny toerana dia eo akaikin'ny imprimerie Niag tsy lavitra loatra ny Magro Behoririka. Raha liana ianao dia tongava... fihaonana tsotsotra io, asaina ho tonga ao avokoa ny avy amin'ny lafivalo sy ny avy amin'ny firehan-kevitra samihafa.
Tsy ny hifandramatra no hahatongavana eo fa ny hialana voly sy hifankafantarana, ary ho fiarahabana nahatratra ny taona 2011 ihany koa. Koa raha efa mba nandalo teo amin'ny fiainanao ihany izany famahanam-bolongana - fitorahana bilaogy izany dia tongava re raha azo atao. Azonao atao ny mitondra solosaina finday fa maimaipoana, hono, ny fiseraserana ao. Ny fandraisana anjara moa amin'ny ankapobeny dia samy miantoka ny tenany ao na dia misy ihany aza ny fifanampiana madinidinika. Tongava re! tongava re!
Jentilisa 27 janoary 2011
PS: ny famantarana amin'ny twitter amin'io fotoana io dia #antambl
Tohanana ny fandaminana na fomba mahery vaika aza!
2011-01-07 @ 09:07 in Andavanandro
Mialoha ny zava-drehetra dia miarahaba ny mpamaky rehetra nahatratra ity taona vaovao 2011 ity indray. Enga anie mba ho taom-pahombiazana sy taona zina ho antsika ity taona izay diavina ity indray. Mirary soa ho antsika mpamaky rehetra ny mpanoratra noho ny fandinganana izao taona vaovao izao. Hiresaka momba ny tanànan'Antananarivo indray ny tena fa hisintaka kely amin'ny resaka politika feno fitapitaka sy fandrika ary fivadihana mandrakariva. Ny famoahan-kevitro andavanandro rahateo moa sady tsy dia lava dia lasa any amin'ny facebook amin'ny ankapobeny. Amiko manko ny maharesy lahatra ahy dia nivadihan'ireo notendrena hiara-mitantana ny antokony indray ny filoha teo aloha kanefa tsy afaka ny handà ny fihetsik'izy ireo intsony raha tsy te-hataon'ny olona fihomehezana hoe izay anankinana andraikitra rehetra ity mivadika avokoa ary ny antokon'ny tena ihany no tena mpamadika voalohany. Tazoniko ho ahy izay hevitra izay na dia habokaina ho foza aza aho, tsy azo fefena tsy hamoaka ny hevitro ihany koa aho tsinona; nefa izay ihany koa no tsy iresahako betsaka ny amin'izy ity ihany koa aloha.
Hiresaka momba an'Antananarivo indray aho. Hita sy tsapa tokoa ny ezaka ataon'ny mpitondra azy ankehitriny. Angamba noho ny fifanolanana misy eo aminy sy ny minisiteran'ny fanajariana ny tany dia nihasahisahy kokoa ny mpitantana. Tsy dia mampaninona azy intsony na hahatezitra ny "vahoaka madinika" aza ny zavatra ataony mandroaka ny mpivarotra amoron-dalana tsy hanelingenina ny fifamoivoizana sy tsy hanakorontana ny tanàna. Ny zavatra toy izany no tena nanohanako ny filoha Ravalomanana sy ireo notendreny taty aoriana. Fahadisoana lehibe teo anatrehako ny nileferan'i Hery Rafalimanana tsy nanelingelina ny mpivarotra anaty lalana intsony tamin'ny fifidianana ho Ben'ny tanàna izay nahamontsana ny TIM teto Antananarivo tamin'iny fotoana iny. Maniry kosa aho mba tsy hilefitra na oviana na oviana ny mpitantana ankehitriny na dia ho avy aza ny fifidianana ho Ben'ny tanàna.
Miala tsiny aho fa somary masiaka amin'ny fandaminana ny tanàna. Efa nomena toerana hivarotany ireo mpivarotra ireo nefa tsy tiany hono ny any fa tsy misy tsena. Vavabe nataon'ny mpivarotra anaty lalana tamiko indray maka ny hoe tanim-panjakana eto ka tsy hiala eto izahay raha tsy ny fanjakana no manala anay eto. Rehefa nanala azy indray ny Kaominina dia sahiny ny miteny fa tsy ny Kaominina no fanjakana... Marihina fa misy ny minia manery ny lalana hahafahana mangaro-paosy sy manendaka ary maro amin'ireny mpivarotra amoron-dalana (sy anaty lalana) ireny, fa tsy izy rehetra tsy akory, no tena mpiray tsikombakomba amin'ny mpangalatra ary ireny no tena mijery ny vola ananan'ny mpividy mitonantonana eny amin'izy ireny. Raha tena te-hivarotra ireo efa betsaka tokoa ny toerana efa natokana hivarotana no malalaka satria ny hivarotra eny an-dalana no ataony ary izaho aza dia mahasahy mihitsy ny mitaky ny fanagadrana noho ny fanelingenana ny fifamoivoizana sy ny fanakorontanana ny tanàna ary ny fandratrana ny mpitandro ny filaminana ireo mpivarotra tsy hanaiky na oviana na oviana ny hanara-dalàna ireo.
Jentilisa, 07 janoary 2011, amin'ny 11ora07mn